Gịnị Na-Eme Ebe A? - Five Cowries
Afọ Juru Eju Gịnị Na-Eme Ebe A?
GỊNỊ NA-EME EBE A?
Nwebisiinka Polly Alakija
Ụmụaka si Badore Model College dị na Lagos Nigeria na ụgbọ mmiri “Bellyful” ha e tere agwa.
Ị nụla okwu a ‘ị bụ ihe ị na-eri?’ Ihe ị bụ sokwa na ihe ị na-aṅụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ahụ ike, gbasie ike ị kwesịrị ịṅụ mmiri dị ọcha otu lita na ọkara ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị, ma nukwuo karịa nke a oge ọkọchị.
Nwebisiinka David Littschwager, 2006
Mmiri gị ọ dị ọcha n’eziokwu? Nke a bụ mmiri a gbatara na pomp, nke e ji igwe mikroskope nyochaa.
Kedụ ebe ị na-agbata mmiri ọṅụṅụ gị? O nwere ike iyi ka ọ dị ọcha mana ọtụtụ nje anya gị anaghị ahụ adịrị n’ime ya. Ị ṅụọ mmiri a, i nwere ike daa ọrịa. Gbaa mbọ hụ na i siri mmiri ọṅụṅụ gị ruo otu nkeji ma ọ bụ karịa ka o nwee ike gbuo nje niile ndị ahụ dị n’ime mmiri gị.
Nwebisiinka LEKSHIMI PRIYA S 2017
Mmiri a ọ dị ka mmiri dị mma? I nwere ike iri azụ a kụtara ebe a?
Ọ bụrụ na unyi na-egbu egbu dịrị na mmiri gị, ọ gaghị apụ ọcha ma i sie ya n’ọkụ. Ị ga-akpachapụ anya mara ebe ị na-esi agbata mmiri gị. Ọ bụrụ na i siri ebe a na-atufu ihe ma ọ bụ ebe ndị ọrụ ugbo na-awụpụ ọgwụ na-egbu ihe gbata mmiri, mara na kemikal ga-ebunye gị ọrịa nwere ike ịdị n’ime ya.
Nwebisiinka Anon HQ
I nwere ike ịhụ ihe mere nnukwu azụ a ji nwụọ?
Ọ bụrụ na mmiri adịghị ọcha, ọ ga-emekwa ka azụ bi n’ime mmiri nwee ọrịa maka ha ga-eri unyi dị n’ime mmiri. Ndị mmadụ na-atụnye nnukwute unyi n’ime mmiri anyị. Ihe nke a pụtara bụ na afọ iri atọ na-abịa abịa, mkpọ plastik ga-adị n’ime mmiri anyị ga-akari azụ dị n’ime ya. Gịnị ga-emezi anyị niile ndị ezinaụlọ anyị na-eji ịkụ azụ akpata ego?
Nwebisiinka Charles J Sharp
N’obodo Nigeria anyị nwere ụdị nnụnụ Kingfisher iri. Nnụnụ ndị a mara mma na-akụ azụ na-eri, ya mere ọnụ ha jiri buo ezigbo ibu. Ọ bụrụ na ọ bụzi mkpọ plastik juru n’ime mmiri, gịnị ka ha ga-eri? Gburugburu ụwa niile ụmụ anụmanụ na ụmụ nnụnụ na-anwụ maka mkpọ plastik a tufuru atufu juru ha n’afọ. Ọ dị gị n’aka! ime ihe dị iche chekwaa anyị niile.